Ii-CV zoqobo ezingama-40 zokuKhuphela | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Vitae yeKharityhulamu yomyili wegraphic inokuba nomdla kwinyani yokuthetha ngayo njengoko sinjalo okanye into esikwaziyo ukuyenza akudingeki ukuba sisebenzise igama elibhaliweyo njengesithuthi, enyanisweni uyilo lokuqhubeka kwethu ngokwalo lungangaphezulu kokujonga kwaye lunokunika imikhombandlela emininzi ukuba loluphi uhlobo lwabayili kunye nabasebenzi esiyiyo ngokwenene. Kungoko ukubaluleka kokuba IiCV zoqobo ukutsala umdla.
Inyaniso kukuba uninzi lwethu sonke oluzinikele kwelona candelo loyilo (nokuba singabaqulunqi, abenzi bemxholo, abahleli okanye amagcisa abonakalayo) bangathanda sebenzisa i-resume yethu njenge «canvas», kuba ngaphandle kwamathandabuzo siqinisekile ukuba le yethu yeyokwenene ikharityhulam Eyokuqala iya kuchaneka kwaye ichaneke, mhlawumbi ngaphezulu kwegama leziko esifundela kulo okanye neenkampani esisebenza kuzo.
Ngamaxesha athile siye sathetha ngokuziyila, into esiyenzayo ngokuhambelana noyilo lomsebenzi wethu wobungcali. Olu luyilo lomntu-lobungcali okanye lomsebenzi lunento yokwenza nezinto ezininzi. Uhlobo lwethu xa kuziwa ekusebenzeni, utyekelo esinalo lokukhetha umbala wombala kwimisebenzi yethu, ubuchule bakho, ubuchule bakho, kunye nokuqhubeka kwakho kunye neephothifoliyo yakho. Esona sisombululo sisiso ekuphuhliseni uyilo olulungileyo noluyinyani, kukuba zonke ezi zinto zixabisekileyo zivume kwaye zibonisane. Siza kukhetha idosi yoyilo okanye isimbo sethu esifuna ukusibeka kwikharityhulamu yethu yoqobo kwaye ke siyakuba nesibindi kwaye sibe yingozi kangakanani. Ndithi ndiyingozi kuba ngenene kufuneka sifunde ukubikezela kwangaphambili kwiimeko ezithile kwaye ngakumbi kubathetheli abathile. Imangalisa njengoko inokubonakala ngathi, iinkampani ezininzi zikhangela umntu oza kuzalisa isithuba kwisithuba sokuyila kwaye abafuna ukuqonda okuphezulu bayalukhaba olu hlobo lweCV yoqobo. Ngaba kuya kubakho ububhanxa obukhulu kulo mhlaba? Ngokuqinisekileyo ewe, kodwa hayi ngaphezulu kakhulu ngaphandle.
Inyani yile yokuba ukuba siyeke ukuluhlalutya ngononophelo, olu hlobo lokuziphatha lunenkcazo kunye nezinye iingxoxo ezifanelekileyo. Okokuqala kufuneka sikhumbule ukuba ummkeli akayi kuhlala efuna ukuba neengcali ezifanelekileyo kwaye makhe ndichaze. Njengoko ufuna ukuba neyona ngcali ibalaseleyo uyenzayo, kodwa ikakhulu kwiimeko ezininzi awunakho ukuyifumana. Nditsho kwiimeko ezininzi kuba uninzi lwee-SMEs kunye neenkampani eziphakathi, ke ukuba uthatha isigqibo sokuthumela umsebenzi wobugcisa kwi-resume kuyo nayiphi na inkampani encinci okanye ephakathi, kunokwenzeka ukuba abo banoxanduva lwamalungelo Abantu "bayoyika "kwaye bacinge ukuba abayi kuba nakho ukuhlawula oko ukuxabisileyo (kulungile, oku kuyakuhlala kunjalo kodwa ke yenye into leyo). Isisombululo esiliqili nesipholileyo ngamanye amaxesha banokuba nemiphumo. Kwezi ntlobo zeemeko, eziza kuba zezona zininzi, kuya kufuneka ukhethe izisombululo ezisemgangathweni ezingaphezulu, ezinganyanzelekanga ukuba zibe phakathi kwaye ndilapha ukuza kuthetha nawe ngezi ndidi zezisombululo namhlanje kuba zezona zinokusebenza Iinjongo.
1 Ii-CV zokuqala ezingcono kakhulu zokukhuphela
1.1 Qhubeka kwakhona xiruxiru
1.2 Qalela kwakhona Rei nguRei-pash
1.3 Qalisa kwakhona nge-zxcxvxc
1.4 Qalisa kwakhona ngeBrazilnut
1.5 I-Typographic Resume nge-mac1388
1.6 Ukuqhubeka kwam kwangoku ngepixelprop
1.7 Ukuqhubeka kwam ngu-darthkix
1.8 Qalela kwakhona nge-cheektocheek
1.9 Qalisa kwakhona nguKevinPire
1.10 Qhubeka nguKyuzengi
1.11 Qalisa kwakhona ngeheydani
1.12 Qalisa kwakhona ukuphucula ngo-mac1388
1.13 Qalisa kwakhona ukuhlaziywa ngamabini e-twolapdesigns
1.14 I-icART iqala kwakhona nge-icasialnrdy
1.15 Qalisa kwakhona ngeAkashrine
1.16 Qalela kwakhona i-Espanol nge-rogaziano
1.17 Qalela kwakhona nge-bdechantal
1.18 Qalisa kwakhona ikharityhulam ngu-toromuco
1.19 Qhubeka kwakhona ngepuziah
1.20 Qalisa kwakhona ngo-2010 nguheeeeman
1.21 Qalisa kwakhona i-WIP ngu-AchisutoShinzo
1.22 Qalisa kwakhona nge-ILICarrieDoll
1.23 Qhubeka kwakhona neseva ngerkaponm
1.24 Ukuqhubeka kwam ngu-Littlearashi
1.25 Qhubeka ngu-LordGabsta
1.26 Qhubeka kwakhona ngespen
1.27 Ukuzalwa Kwam Qhubeka nguNoviceXyooj
1.28 Qalisa kwakhona ngeebiscuits
1.29 UkuQala ngokuQala okuQalayo nguNikonD50
1.30 Qalisa uMyili wam uMdala ngu-ExtremeJuvenile
1.31 I-Vitae yeKharityhulamu yiarbrenoir
1.32 I-Resume yam entsha ngokuhlala2prove
1.33 ICV nguVerine
1.34 Ukuhlaziywa kweCV nge-xchingx
1.35 I-CV nguGiemax
1.36 ICV nguJohnnywall
1.37 Qalela Ubume bam ngokutsha ngu-liagiannjezreel
1.38 Ikharikhyulamu yam yophononongo
1.39 I-CV Tudor Deleanu yiTudor
1.40 I-Adam Balazy CV nguBalazy
Ii-CV zokuqala ezingcono kakhulu zokukhuphela
Apha ngezantsi ndingathanda ukwabelana ngokhetho lwento kwaye akukho nto ingaphantsi Imizekelo engama-40 yoqobo ye-cv esinokuziqhelanisa nayo nayiphi na iprofayile yethu. Nangona ezinye zazo zinokuba yingozi kakhulu, unokuhlala uzisebenzisa ukukhuthaza kwaye ungeze ezinye zeempawu zazo kwi-CV yakho yoqobo:
Phinda Uqalele by ixiruxiru
Iziqhamo zithatha intsingiselo ekhethekileyo apha kwaye zibonelela ngesiqalo, ubutsha kunye nolutsha phantse kwesi sicelo sinomdla sekharikhulamu yentsusa
Qalela kwakhona uRei by I-Rei-pash
Kule mzekelo, iphepha lodonga lisetyenziswa njengesixhobo ukunika umnxeba wobuhle kunye nobuchule kuyilo.
Phinda Uqalele by zxxxxsi
Iipeyinti zokupeyinta mhlawumbi lolunye lweempawu ezigqibeleleyo zenkululeko yokuyila.
Phinda Uqalele by sdlinyiti
Lo mzekelo ubonakalisa ulwakhiwo olusebenzisa imigca kunye nelogo kakuhle.
Ukuqhubeka kokuchwetheza by mac1388
Ukudlala ngoonobumba kunye neefonti kunokubonelela ngeziphumo ezilungileyo kakhulu.
Ukuqhubeka kwam kwam ngoku pikprop
Ipowusta eyoyikisayo njengesindululo sokuqhubeka kwakhona. Kuyamangalisa!
Ukuqala kwam kwakhona by yomza
Isishwankathelo somzobo kunye ne-silhouette ye-protagonist kunye neelebheli ezithile ezichazayo.
Phinda Uqalele by sifsa
Isindululo esinomtsalane kakhulu kunye nezinye iindlela zobugcisa bepop kwaye mhlawumbi nesimbo esithile se-retro.
Phinda Uqalele by KevinPire
Ngamanye amaxesha ukwenza indibaniselwano elungileyo yemibala kunye neemilo kungaphezulu kokwaneleyo.
Phinda Uqalele by kyuzengi
Ukungazinzi kwimigca kunokubonelela ngeziphumo ezinomtsalane njengakulo mzekelo.
Phinda Uqalele by Heydani
Sinokubhenela ekusebenziseni ii-silhouettes ezihamba neefonti kunye nokungalingani kunokunika iziphumo ezintle.
Qalisa kwakhona ukuphucula by mac1388
Lonke ulwazi lugxile kwiqela leeleta, ngokujonga nje sinokufumana lonke ulwazi.
Qalisa kwakhona ukuhlaziywa by ukuyboes
Nanku umzekelo olungileyo apho imibala, ii-silhouettes, izakhiwo ezingalinganiyo kunye neeleta zixutywe kakuhle.
icART ishwankathela by zekwinshine
Kubandakanya iifoto ezintle zinokongeza umnxeba wobunkunkqele ekuqhubekeni kwethu, ngakumbi ukuba yimifanekiso esimele kakuhle.
Phinda Uqalele by Akashrine
Isilwanyana sasekhaya ngamanye amaxesha sinokubonakalisa inxenye yesimilo sethu. Kulo mzekelo sidlala nge-silhouette ye-squirrel.
Qalisa kwakhona iSpanish by rogazian
Umxube wemibala akufuneki ukuba wehliselwe kwizinto zokuhombisa, sinokwenza indibaniselwano enkulu phakathi kokubhaliweyo, imifanekiso kunye neemilo.
Phinda Uqalele by inkko
Ngamanye amaxesha sinokubhenela kwizisombululo ezingaqhelekanga okanye ezingacacanga, kodwa kungabi ngaphantsi kwezisombululo.
Qalisa kwakhona ikharityhulamu by mzantsi
Sinokubandakanya imizekeliso emincinci kwaye siyisebenzise ukudlala imidlalo yamagama kunye nabo.
Phinda Uqalele by puziah
Iigradients, imibala kunye nemifanekiso inokusebenza kakuhle xa siyazi ukuba singazihlanganisa njani nefoto entle yomntu.
Qalisa kwakhona ngo-2010 by Heeeeman
I-infographic inokumela amandla ethu kunye namandla ethu.
Shwankathela iWIP by AchisutoShinzo
Apha sifumana imephu ye-metro, kwindawo nganye yokumisa uyakufumana idatha ye-protagonist.
Phinda Uqalele by NGUYI
Sinokubonelela ngochukumiso lobuqu noluthandekayo ngokubandakanya useto olusondeleyo njengetafile yomsebenzi.
Qalisa kwakhona iServer by yanksi
Iifonti ezibhalwe ngesandla zinokubonelela ngentetho esondeleyo nangakumbi yoyilo njengakulo mzekelo.
Qalisa kwakhona by lukhanyiso
Ngohlobo lwe-serif kunye nokuthungwa kwe-grunge sinokufumana iziphumo ezamkelekileyo.
Phinda Uqalele by Lordgabsta
Imizobo kunye nemizekeliso zinokumela isimbo sethu kakuhle, nangona kufuneka sazi indlela yokuzikhetha kakuhle.
Phinda Uqalele by chitha
Nantsi enye infographic enomdla ngokudibanisa imibala.
Ukuzalwa Kwam Qhubeka nguNoviceXyooj
Ukujongwa kwaseMpuma kunokunika isiphumo sobugcisa ngakumbi ekuqhubekeni kwethu.
Phinda Uqalele by iibhiskithi ezilishumi
Kulo mzekelo sibona indlela izinto ezinje ngemifanekiso, izibiyeli, ukufiphaza kunye neefonti ezisetyenzisiweyo.
Qalisa ukuQala kokuQala by I-NikonD50
Ngaphandle kwamathandabuzo enye yeendlela zam endizithandayo. I-radial gradient resume emile kwakhona enezihloko kunye nemifanekiso ethe tyaba.
Qalisa uMyili wam uMdala ngu Ugqithisileyo
Uhlobo lwekhathuni lunokunika isithako esongezelelweyo sokutsha kunye nomoya wolutsha.
I-curriculum vitae by arbbhodo
Apha sifumana ikharityhulamu yezobugcisa ethatha ithuba lobunzulu bolwandle ukuveza idatha.
Ukuqala kwam kwakhona by yivisa
Umzekeliso oneetshathi zepayi kunye nezinto ezikwimo yomfanekiso osicaba.
CV by Igama loqhagamshelwano Verine
Ikharityhulamu esekwe ekusetyenzisweni kwemibala eyakha inkqubo ye-CMYK, efanelekileyo kuyilo lwegraphic.
CV ebuyekeziwe by xchingx
Izinto ezinqabileyo kwimvelaphi emnyama. Ukhetho olunomdla kwaye ngokuqinisekileyo ngaphakathi kwe-CV yoqobo esiyifunayo.
CV by IGiemax
Singasebenzisa izakhiwo zesetyhula ukudibanisa nezinto ezinomda ezibonelela ngobuhle obongeziweyo.
CV by UJohnnywall
Ukutshintsha imeko ekubonakaliswe kuyo iifonti kunokubonelela ngengqondo eyongeziweyo.
UkuQala kwam kokuBumba by yobunjin
Nanku omnye umzekelo ongena kwii-CV zoqobo, ezobuqu kunye nefoto kunye nokusetyenziswa kweefonti ezibhalwe ngesandla.
Ikharikhyulamu yam yophononongo
Ngamanye amaxesha isisombululo esilula nesicocekileyo sinokuqulatha izinto ezinobuchule. Nanku umzekelo.
I-CV Tudor Deleanu yiTudor
Sebenzisa iphalethi yombala wePantone kunokuba luphawu olunempumelelo kakhulu ukuba uyilo lomzobo.
UAdam Balazy CV by I-Balazy
Ubume be-grunge, imizobo ethe tyaba kunye nabalinganiswa bekhathuni.
Ucinga ntoni ngolu khetho lulungileyo? ICV yoqobo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » ICV yoqobo
zilunge kakhulu zonke .... ziyahlaziya umbono kakhulu
Kulungile kulungile !!! Ndizithandile !!!
UFabuleusa Inamomes ngu-Alana noSinjexa kunye noBrado Daras. I-riamo aramoss kunye ne-fratuico amegimo ene-dolulo preserves!
ndingasifumana phi isifundo sokwenza
Ukudityaniswa okugqwesileyo, ndinemibono elungileyo kakhulu yoyilo lokuqhubeka kwakhona kwexesha elizayo!
UKatherine Salinas Mendoza sitsho
Bazibiza ezi modeli zekharityhulam, ezize nezinto ezingenangqondo, ziyothusa kwaye azihlekisi ... ikharityhulam, ha!
Phendula uKatherine Salinas Mendoza
yeka ukufunda ubomi, ufumane ulwazi kwaye ukhulule ingqondo yakho
Utsho kakuhle. Uyabona ukuba eli nenekazi alazi malunga noyilo kwaye linoluvo lwalo. Ngaphakathi kwezi ziqala kwakhona kukho inkqubo ebalulekileyo yokuyila kunye nokusebenza kunye nenyaniso ethi andiyithandi le nto yokuthi ivela kumntu ongazi nto nongavuthanga. Ndiyabulisa!
UJuan p sitsho
awumazi umhlobo, kuya kufuneka ube ligqwetha lomgcini zincwadi okanye into edesikeni kuba awazi
Phendula ku juan p
Katherine, inkcubeko yakho yemizobo, ubuchule kunye nobukrelekrele bonisa okuninzi.
Ikharityhulam kwisininzi yile: Curricula.
I-zeta yobuyatha ibonakala ngokungabikho kwayo.
Ehlekisayo ... yeyakho kuphela.
URogelio Cuervo Zarate Mhlophe sitsho
Phendula uRogelio Cuervo Zarate Blanco
Kuyaphawuleka ukuba akazi kwanto ngobuchule bokuyila kunye nobukrelekrele ...
Kubonakala kum ukuba ukugqiba ukuba uKatherine akakho krelekrele, akanalwazi kwaye akakakhuli kwingcaciso yakhe kubonisa ukukhula okuncinci ...
Ezi ziqala kwakhona zinobuchule obukhulu, kodwa uninzi lwazo alufundeki. Ndibonile okuninzi kokuyila ngokutsha kunye nokuyila okumangalisayo obekufundeka ngokugqibeleleyo. Andazi ukuba inkqubo yokhetho injani kwihlabathi lakho, kodwa uyithumela njani i-resume yakho kwinkampani engayilwanga ngokukodwa kunye ne-hr recruiter. ziyafana nakwezinye iinkampani (oonobhala, abaphathi, iinkqubo, iinjineli, ...) isiqingatha sezi CVs ngekhe sibe nethuba, kuba umqeshi akazukuchitha ixesha echaza ulwazi.
Njengoko besitsho phezulu, bayahlaziya kakhulu, kodwa balungile ukuxhoma eludongeni, hayi ukuba bafunde ngaphakathi.
UYuri Luis Medina Barrios sitsho
Ubuncinane yi-30% yemizekelo eyenziwe kakuhle… eminye iseluhlaza.
Phendula uYuri Luis Medina Barrios
kukho ezinye ezingekhoyo kwaphela .. Ndabelana ngombono kaLuis Medina
Phendula uLuis A.
Handz valentin sitsho
Ezi zinto ziqala ngokutsha zinomdla. Ilungele umvelisi kunye nomyili… nangona kunjalo, ndizibonile ezinye iinkampani "ezimandundu" ziziqabile ezi CVs zintsha.
Phendula ku-Handz Valentin
USilvia Vera uLaceiras sitsho
genials !!!! bandikhuthaza kakhulu
Phendula uSilvia Vera Laceiras
Ii-CVs zinokuba zezentsusa njengoko ufuna, enyanisweni, zonke zichitha umsebenzi omninzi wokuyila kunye neeyure ezininzi zomsebenzi, kodwa ndicinga ukuba akufuneki silibale ukuba sizalathisa kubani. abo bakhetha, benze udliwanondlebe kunye nokuqesha okanye hayi) kwaye loluphi ulwazi esiludlulisayo. Umfanekiso webrand awufezekiswanga kuphela kuyilo olulungileyo, kuya kufuneka unikeze umyalezo osemgangathweni. Imibuliso kubo bonke
Ndicinga ukuba izinto ezininzi ezenziweyo ziyilelwe ayibonisi ubuzaza ekufanele ukuba babonelele, abanye bajongeka ngathi ziibhilibhodi okanye into enjalo.
Phendula ku- raquel1@hotmail.com
Ukuqala kwakhona kubulela umbuliso omnandi